Friday January 19, 2018 - 13:20:41 in Wararka by Super Admin
Warar ka imaanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in ciidamo Mareykan iyo Soomaali ah ay markale xasuuq daran ka geysteen deegaan katirsan gobolkaasi.
Toogashada ay geysteen ciidamada huwanta ah waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 carruur ah iyo mid kamid ah macallimiinta Machadka halka ay qafaasheen carruur kale oo wax ka baranayay Machadka.
Dad ka badbaaday xasuuqa ayaa warbaahinta u sheegay in ardaydii wax ku baranayay Machadka ay noqdeen kuwa dhintay, kuwa cadawgu qafaashay iyo kuwa dhulka Howdka ah Ku Firxaday.
Weerarkan ayaa imaanaya maalmo yar kadib markii warbixin kasoo baxday Hay’adda HRW lagu sheegay in waxbarashada sharciga islaamiga ah ay kusii faafayso wilaayaatka islaamiga ah ee Soomaaliya taasi oo gogol xaar u aheyd tallaabtan ay qaadeen ciidamada Mareykanka iyo Soomaalida ah.
Sanaddii lasoo dhaafay ayay dowladda Mareykanka waxay xasuuq daran ka geystay deegaanno katirsan gobolka Sh/Hoose iyo Jubbooyinka.